ညီလင်းသစ်: ဒုတိယဆုံမှတ်၏ ပွင့်ဖူးစ နေ့ရက်များအကြောင်း
Posted by ညီလင်းသစ် au 8.9.13
ဒီတစ်ခါ... အစောကြီးကို ကြိုပြီး ကြော်ငြာနေပါလား? :P
Are u going home? Sweet!
I am happy eventhough I got only few hours.
I am happy even though I got only few hours....
(ဟင်း ဟင်း... ညီ့ ဆီက ကူးချလိုက်တယ်နော်... ပေါ်တင်ပဲ...)
သားသား ပါလာမှာလား အစ်ကို ?
"လောကဓာတ် ကြွက်ကလေးရဲ့ ခေါင်းအညိတ်မှာ
ဟောဒီ ဘဒ္ဒကမ္ဘာလည်း မြေကြောရှုံ့ ခဲ့ရပြီ…၊"
ဒီကွန်မန့် လေးကိုလည်း လောကဓါတ်ကြွက်ကလေးအကူနဲ့ ပုို့ လိုက်ပါတယ်။ လေကြောရှုံ့ တယ်ခေါ်မလားဘဲ။
ဘာရယ်မဟုတ် ဟုိုးငယ်ငယ်လေးတုန်းကဖတ်ဖူးတဲ့ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်လေးကိုသတိရမိတယ်။ "မရိပါနဲ့ ကြွေသွားမယ်" တဲ့...
ကြိုဆိုပါတယ်ညီလင်း၊ မရိတ်သိမ်းချင်တဲ့အရာတွေအတွက် မစိုက်ပျိုး မိအောင်နေတယ်။ ငြိမ်းနှစ်သက်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ လေးပါ။
ဖြည်းဖြည်းဆေးဆေး အရသာခံပြီး ဖတ်သွားတယ်...ဖတ်ရင်းတွေးရင်း အတော်အရသာရှိတာ အမှတ်ထင်ထင်ပါပဲ...ကျေးဇူး ကိုညီလင်းသစ်
မနာလိုချင်စရာပါပဲလား အကို.... :P ဒုတိယ အကြိမ်ဆို အမှတ်ရစရာတွေက ပထမအကြိမ်ထက် ပိုနေမယ်ထင်တယ်... ။ အကိုရဲ့ အက်ဆေးလေးတွေကနေ စောင့်မျှော်ရတော့မှာပေါ့နော်အကို..:)
အစောကြီးရင်ခုန်နေတယ်ဆိုတာ အကို့ကို စတာနော်
သမီး ရင်ခုန်တာ အဟုတ်ပူး
တော်ကြာ သာမီးကို ချင်ကာပူက မှတ်နေဦးမယ် :D :D
အင်း.. နောင်လည်း ကြေညာရမယ့် အတူတူ အခုကတည်းက တစ်ခါထဲပဲ ကြေညာ လိုက်တော့တယ်...၊း)
Thank you sis...!
အဲ.. မဟုတ်ဘူးဗျ၊ အိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးတော့တဲ့ ခရီးလို့တော့ ပြောရမလားပဲ...၊း)
Thanks bro! Yeah.. it was extremely tight. :)
Thanks sis! Yeah... it was extremely tight. :)
(ဟင်း..ဟင်း.. ညီ့လိုပဲ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်နော်... ပေါ်တင်ပဲ)
မပါဘူး ညီမရဲ့...၊ သူက ကျောင်းမပိတ်ဘူးဗျ..၊း)
အဲဒီက ကြွက်ကလေးကလည်း ခေါင်းညိတ်တယ်လား၊ ဝတ္ထုခေါင်းစဉ်လေးကိုတော့ ရေရေလည်လည် ကြိုက်သွားပြီဗျ၊း)
ရော်.. ဒီကလေးနှယ်.. နောက်ပြန်ပြီကော...၊းD
ဟုတ်... နီးလာတဲ့အခါ ကျနော် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ် ညီမရေ...၊
မနာလိုမဖြစ်နဲ့ဗျ..၊ လေယာဉ်လက်မှတ်က လျှော့ဈေးတွေ ချနေတာ.. လာ.. လာ လိုက်ခဲ့...၊း)
အံမယ်.. အံမယ်.. ဖြေရှင်းချက် လာပေးတယ်ပေါ့လေ၊း) ဒီအရေးအသားကို ကြည့်ကတည်းက ဒီညီမမှန်း သိပါတယ်ဗျာ၊ အိုင်ပီတောင် စစ်နေစရာ မလိုပါဘူး။းD
ညီ, လေးသနားပါတယ် မြေဇာပင်ဖြစ်နေပြီ
ရော်ရွက်တို့ မြေခချိန်မှာ အဲဒီအနီရောင်အစက်ကလေး
အပေါ်မှာ တစ်ချိန်က ကသောင်းကနင်းနဲ့အမှားမှား
အယွင်းယွင်းတွေနဲ့ ဧည့်ဝတ်ကြေချင်လျက် မကြေဖြစ်
ခဲ့တဲ့ သိုးမဲလေးတစ်ကောင်တော့ နောက် ဧည့်ဝတ်ကြွေး
ကို ကျေအောင်ဆပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအကိုရ.... :(
အားကျပါ့..ညီမကတော့ အနီရောင်အစက်ကလေးဆီ မပြန်နိုင်တာ ၃ နှစ် ရှိပြီ...
သူမို.ပြန်ပြီဆိုရင် ချဉ်ပေါင်ကြော်ပန်းကန် အနီးကပ်ပုံတို.၊ မုန်.ဟင်းခါးပန်းကန်ပုံတို. ....လာတော.မှာကြိုမြင်ယောင်သေး။
မည်သို.ပင်ဆိုစေကာမူ အကျွနုပ်တို.လဲ ဒီဇင်ဘာ ပြန်မည်ဆိုတော. ဒီတခါတော. ခံနိုင်ရည်ရှိမှာပါ ဌဲဌဲ..
ကြိုက်တယ် ဒီအသုံးအနှုန်းလေး ဘာတဲ့
I want to visit again too. I hadadream the other day, I was late to go to airport for Singapore trip. Enjoy the trip!
welcome again bro..
ပြည်တော်ပြန် ... :)
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဆုံခွင့်ရမယ်ထင်ပါရဲ့ မောင်ညီလင်းရေ..
အခုတော့ရေးခွင့် ဖတ်ခွင့်တွေနဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်နေတယ်း)
“ တည်ဆောက်ဖို့ အားမထုတ်သလို
မြောက်ပြန် လေညှင်းလေးပဲ မဟုတ်လား...”
ကိုညီက ကဗျာရေးလဲ ကောင်းတယ်ဆိုတာ အခုတော့သိပြီ... :)